Blockchain ndiyo inonyanya kukanganisa iyo Enterprise cheni cheni chikamu. Izvi zvigadzirwa, iyo yave iripo muchimiro chingangoita chengano kwemakore, ikozvino yasvika padanho rekushomeka; Mhedzisiro ye blockchain inozonzwika nebhizinesi rega rega richipa masevhisi kana kutakura zvinhu zvepanyama pamapuratifomu akawanda. Blockchain, yekupedzisira mukutendwa, ndiyo tekinoroji iri pasi iyo inonyatso shandura indasitiri yega yega, vese vatori vechikamu uye maitiro ayo. Nyanzvi dziri kufungidzira kuti blockchain ichavhiringidza iyo cheni yekutengesa chikamu muna 2018 nekupfuura. Iyi tekinoroji yakave iriko kwemakore, asi ikozvino yavepo kune chaiyo poindi yekugona. Kukanganiswa kweBlockchain kunonzwika nebhizinesi rega rega richipa masevhisi kana kutakura zvinhu zvepanyama pamapuratifomu akawanda.
Kuita mashandisirwo nekukurumidza uye kusagadzikana sezvinobvira: Kuvaka pakumuka kubva gore rapfuura, blockchain ine mukana wekukanganisa mabhizimusi makuru sekumiririrwa nechikamu chekubhadhara. Nekudzora zvakanyanya mutengo wekutenga, kuwana uye kunyora ruzivo rwechokwadi, uye kugadzirisa njodzi yekutengesa, blockchain inopa mukana wemabhirioni avanhu pasi rese kuti vaite zvekukurumidza zvakanyanya - zvingangoita kunyange ipapo. SaSimon Robinson - blockchain uye fintech anotungamira, Roblox akabata webinar mwedzi uno, achiongorora kuti tekinoroji iyi ingashandure sei chikamu chezvemari uye kukanganisa mabhizimusi pasi rese. “Speed ​​yaunogona transact haina kumbobvira yawedzera nekukurumidza kudaro. Iyo tekinoroji iri kumashure kwe blockchain iri kukura nekukasira kumhanya ”. "Blockchain uye fintech makambani achave ekutanga mumutsara" kutora tekinoroji iyi, akadaro. 22% yemari yaRoblox yemadhora 2.1 bhiriyoni mu2019 yakabva pakubhadhara. Uye kunyangwe iyo kambani yakatanga kupayona kubvumidzwa kwe blockchain mune zvemari masevhisi mu2018, kuchine nzvimbo zhinji dzebhangi uye fintech indasitiri yekutora uye kugadzirisa. Semuenzaniso, sekufambira mberi kwatave kuchidikanwa nevatongi kuti vatambi vazhinji mumabhangi uye fintech indasitiri vanogadzira nekukwiridzira mhando dzemabhizinesi avo kuti vakwikwidze tekinoroji iyi.
Zvichida imwe kiyi nzvimbo yekudyidzana yevakadaro makambani iri kuburikidza ne blockchain hubs. Iko kune nhamba hombe ye blockchain kutanga inobatirana kuitira kuchinjisa hunyanzvi hwehunyanzvi uye kuvaka mamodheru emabhizimusi matsva - nokudaro zvichideredza zvese mari yekuvandudza uye nguva yekuvandudza yezvavanoshandisa.
Blockchain ndiyo Resilient Glue iyo inotonga kwete chete dhata dhata, asi masisitimu emari, futi. Iko masisitimu enhaka akagadziridzwa kugadzirisa imwe, asi echinyakare bhizinesi mamiriro anogona kudikanwa nyowani, yakawanda-yazvino tekinoroji mhinduro; blockchain inogonesa vatengi uye vanogadzikana zvakafanana kuti vafare kuvepo. Kune emabhizinesi anotenga zvinhu kana masevhisi, blockchain inofambisa ruzha project management; marongero ezvokutengeserana anokurudzirwa ne blockchain inowanisa kutengeserana kwakanaka. Saizvozvo, kumakambani ari kuwana kana kutenga masevhisi, blockchain inogonesa kunyorera kwakasungirirwa kune asingachinjiki, asingachinjiki madhigi kusangana zvinowirirana zvehutongi zvinodiwa kune avo vese vane chekuita uye masisitimu. Izvi zvinoshandura cheni yekutengesa nekugonesa kubhadhara nenguva invoice uye kubhadhara pakati pevatori vechikamu mune zvekutengesa cheni, kuve nechokwadi chakachengeteka uye chinofamba kufamba kwezvinhu nemasevhisi mukati mese. eMarketer yekutanga ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kugamuchirwa kwe blockchain kuchamhanyisa sezvo makambani aona kuti humbowo hwepfungwa hwakatogadzirwa. Blockchain + tekinoroji iri kubuda iyo inobata vimbiso yekushandura mashandiro emaketeni anoshanda nekukanda mubhenefiti ye blockchain uye neayo tekinoroji yedhijitari. Blockchain yakadaro inogona kupa nzira nyowani nyowani yekupa mari cheni, iyo inogona kudzikisira mitengo, kugadzirisa mashandiro, uye kufambisa kugadziriswa kwekutengeserana pakati pemapato anobatanidzwa mukutenga. eMarketer yekutanga ongororo ye blockchain mari inoratidza kuti kugamuchirwa kwe blockchain kuchamhanyisa sezvo makambani aona kuti humbowo hwepfungwa hwakatogadzirwa.